Morinho iyo Terry Oo Isku Khilaafay Xiddiga Sannadka ee EPL – Hazard v Coutinho
HomeWararka MaantaMorinho iyo Terry Oo Isku Khilaafay Xiddiga Sannadka ee EPL – Hazard v Coutinho
Tababaraha iyo kabtanka kooxda Chelsea ee Jose Mourinho iyo John Terry ayaa isku khilaafay xiddiga ugu wanaagsan horyaalka Premier League sannadkan, kaas oo ay soo kala xusheen laba ciyaartoy oo midna Chelsea u ciyaaro ka kalena Liverpool.
Kabtanka Kooxda Chelsea ayaa shalay qoraal uu soo saaray waxa uu ugu doortay xiddiga sannadka laacibka khadka dhexe ee Coutinho oo ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan Liverpool kaas oo qaab ciyaareedkiisu si fiican ugu cadcadaa ciyaartooyada kale.
Waxa arrintan ka soo horjeedsaday Jose Mourinho oo warbaahinta isugu yeedhay si uu uga jawaabo doorashada Terry ee Coutinho, waxaanu sheegay in shaki la’aan ay tahay, isla markaana doorashada ugu fudud ee xiddiga horyaalka Ingiriiska ee sannadkan uu yahay Eden Hazard.
Jose Mourinho ayaa sheegay in uu Hazard yahay xiddiga ugu wanaagsan, isla markaana uu rajaynayo xiddiggu mar kale ka soo baxo Chelsea iyadoo ay ugu dambaysay ciyaartoy Chelsea ah in uu noqdo xiddiga sannadka ee Premier League xili-ciyaareedkii 2004-05, markaas oo difaacyahanka Chelsea la siiyey kadib markii ay kooxdaasi ku guuleysatay horyaalkeedii ugu horreeyey muddo 50 sannadood ah.
“Marka la eego waxa uu qabanayo, aniga oo si daacadnimo leh u hadlaya, xattaa lagama doodi karayo in Hazard uu yahay xiddiga ugu wanaagsan.” Sidaas ayuu yidhi Mourinho oo wariyeyaal ugu warramayay magaalada London.
Jose Mourinho waxa uu si adag ugu jawaabay John Terry, waxaanu yidhi: “Haddii qof uu miiska ku soo tuuro magacyo, macnaheedu waa in joornaalka lagu iibinayo, dadka ayey indhaha ciid kaga shubayaan. Ciyaartoygani (Hazard) wuu ka fogyahay in lagu sheego kaliya ciyaartoyga ugu wanaagsan.”
Tababare Mourinho waxa uu sheegay in horyaalka Premier League uu ka adag yahay horyaallada kale ee dunida, isaga oo caddayna ka dhigtay inta kooxood ee ku tartamaysa kaalmaha ugu horreeya oo uu ku tilmaamay Manchester United, Arsenal, Manchester City, Liverpool iyo Tottenham.
Si gaar ah waxa uu Mourinho u xusay tayada kooxaha kaalmaha dhexe ku jira oo uu sheegay in ay adag tahay in si sahal ah lagaga guuleyso.
Real Madrid vs Real Sociedad 5-2 Goals LaLiga (10-2-2018) HD
10/02/2018 Diiriye Ahmed
Real Madrid Oo Guul Xummad-Jebin Ah Ka Gaadhay Leganes
All Goals & Highlights: Gremio 1-0 Pachuca